အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရခဲ့ပေမယ့် အ ကြော်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကို မစွန့်လွှတ် ဘဲ ချစ်ဇနီးနဲ့အတူ မောင်တစ်ထမ်း မယ် တစ်ရွက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သားငယ် – XB Media Myanmar
အဆိုတော် သားငယ်ကတော့ Myanmar Idol Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက် ယှဥ် ပြို င်ခဲ့ပြီး Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲ ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံအားပေးမှုကို အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယ်က အ ခု ဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို ရရှိထားပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားငယ်က အသံကောင်းသလို အ ရည် အချင်းလည်းရှိတာကြောင့် ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။
အရင်က ချစ်ဇနီးချောလေးနဲ့အတူ အကြော်ရောင်းခဲ့တဲ့ သားငယ်က အခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့အ ချိန် မှာတောင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကို တန်ဖိုးထားကာ လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါ တ ယ် ။ သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံက အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမောင်တစ်ထမ်းမောင်တစ်ရွက် ဆောင်ရွက်တတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ သဘောကျနေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သားငယ်က ချစ်ဇနီးနဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သားငယ်က “ပဲစိမ့်ကြော် ရောင်းမယ်ဟေ့ !Live လွှင့်ပြီးရောင်းရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမ လား ” ဆိုပြီး အကြော်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို တင်ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပကာသနတွေကင်းတဲ့ သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဘဝလေးကတော့ အရမ်းကိုအေးချ မ်း ပြီး ပျော်စရာကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အဆိုတော်သားင ယ် တို့စုံတွဲရဲ့ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source & Photo Credit-Thar Nge’s FB Page
အဆိုေတာ္ သားငယ္ကေတာ့ Myanmar Idol Season2သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာဝင္ေ ရာ က္ ယွဥ္ ၿပိဳ င္ခဲ့ၿပီး Winner ဆုႀကီးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ ပါတ ယ္ ။ ၿပိဳင္ပြဲ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ဝန္းရံအားေပးမႈကို အ မ်ား ဆုံးရရွိခဲ့တဲ့ သားငယ္က အခု ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝကို ရရွိထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။ သား င ယ္က အသံေကာင္းသလို အ ရည္ အခ်င္းလည္းရွိတာေၾကာင့္ ဂီတလမ္းေ ၾ ကာင္းေပၚမွာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
အရင္က ခ်စ္ဇနီးေခ်ာေလးနဲ႔အတူ အေၾကာ္ေရာင္းခဲ့တဲ့ သားငယ္က အခုလိုေအာင္ျ မင္ေနတဲ့အ ခ်ိန္ မွာေတာင္ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလးကို တန္ဖိုးထား ကာ လုပ္ကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သားငယ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလ ည္းေမာင္တစ္ထမ္းေမာင္တစ္႐ြက္ ေဆာင္႐ြက္တတ္တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကပါ သေဘာက်ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလည္း သားငယ္က ခ်စ္ဇနီးနဲ႔ပုံရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေ ဝထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
သားငယ္က “ပဲစိမ့္ေၾကာ္ ေရာင္းမယ္ေဟ့ !Live လႊင့္ၿပီးေရာင္းရမလား ! Delivery နဲ႔ ပို႔ရမ လား ” ဆိုၿပီး အေၾကာ္ေရာင္းတဲ့လုပ္ငန္းမွာ ေပ်ာ္႐ႊ င္ေ နတဲ့ပုံေလးေတြကို တင္ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပကာသနေတြကင္းတဲ့ သားငယ္တို႔ဇနီးေ မာ င္ႏွံရဲ႕ဘဝေလးကေတာ့ အရမ္းကိုေအးခ် မ္း ၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းေ နတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကဲ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အဆိုေတာ္သားင ယ္ တို႔စုံတြဲ ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။
သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံနဲ့ ရင်းရင်း နှီးနှီး ပတ်သတ်မှု တစ်ခုအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ တေးရေး ဝေကြီး